Wararka ka imanaya Afrika Mar haddii ay tahay isha is-dhexgalka gobolka, Beesha Bariga Afrika ee Bloc ayaa la halgamaya Damas - Amjambo Africa
Wararka ka imanaya Afrika Mar haddii ay tahay isha is-dhexgalka gobolka, Beesha Bariga Afrika ee Bloc ayaa la halgamaya Damas
Ururka Bariga Afrika waxaa ku jira lixda dal ee Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania, iyo Uganda. Labadii sano ee la soo dhaafay, Uganda iyo Rwanda waxay jareen xiriirkii labada dhinac, waxayna Rwanda xirtay xuduudaheeda bishii Maarso 2019. Wadamadu waxay isku eedeeyaan midba midka kale inuu gabbaad ka dhigto oo damacsan inuu qalqal galiyo amniga qaranka.
Dadaallada dhexdhexaadinta waa la joojiyey markii CVID-19 uu dhacay. Dhawaan, Uganda waxay ku dhawaaqday inaysan u oggolaan doonin dadka reer Uganda inay u safraan Rwanda, tallaabadaas oo ka yaabisay dad badan oo filayay in xiriirku caadi noqdo mustaqbalka dhow. Ruwanda waxay ka warbixisay goosashada sarkaal militari oo firfircoon ciidamada Uganda. Ruwanda waxay ka warbixisay goosashada sarkaal militari oo firfircoon ciidamada Uganda. Dhanka kale, sida laga soo xigtay The Observer, oo ah warbaahin u dhalatay Uganda, 11-kii Ogosto Uganda waxay ku eedeysay 7 ka mid ah saraakiisheeda amniga ee firfircoon inay la wadaageen sirta sirta ah Rwanda. Marka la eego murannada socda, furitaanka inta badan la filayo ee xudduudaha ganacsiga waxaa loo baahan yahay in yar in yar.
Si shidaal loogu daro dabka gobolka, xiriirka Burundi iyo Rwanda ayaa sidoo kale qasan, iyadoo dowladda Burundi ay ku eedeysay Rwanda inay taageerto mucaaradka oo isku dayaya inay abaabulaan afgambi xukunka looga tuurayo madaxweynihii geeriyooday ee Nkurunziza. Isla mar ahaantaana, dawladda Rwanda waxay ku eedeynayaan Burundi inay ilaaliso argagixisada Xoogga Argagixisada ee ‘Democratic de Freedom du Rwanda’, ama ‘FDLR’. Madaxweynaha Paul Kagame ee Rwanda ayaa dhawaan sheegay in Rwanda ay diyaar u tahay inay caadi ka dhigto xiriirka kala dhexeeya madaxweynaha cusub ee Burundi, Evariste. Si kastaba ha noqotee, Ndayishimiye wuu diiday dalabka, wuxuu dalbaday in qabanqaabiyeyaasha afgambiga marka hore loo soo wareejiyo si ay caddaaladda u wajahaan.
Dhinaca kale, xasiloonida Kenya iyo Tansaaniya ayaa ka ganacsata cinwaanno mataano ah iyada oo taxaddar ku jirta dhaqaalahooda u furay, iyadoo Al Jazeera ay soo warinayso in Kenya aan liisaska muwaadiniinta Tansaaniya ka mid ahayn kuwa u duuli kara Kenya, Tansaaniyana ay mamnuucday Kenya Airways. duulimaadka Daarusalaam.
Sanadihii la soo dhaafay, ururka bulshada Bariga Afrika wuxuu soo koobay suuq guud, hal lacag, xuduudo furan, iyo mashaariic waaweyn oo kaabayaasha ah sida Standard Gauge Railway. Laakiin iyadoo ay sii socdaan khilaafaadka u dhexeeya Rwanda, Uganda, iyo Burundi, mustaqbalka ururka wuxuu umuuqdaa mid aan la saadaalin karin.
PreviousWararka ka imanaya Afrika hero hero Geesiga Soomaaliyeed Dr. Xaawo Cabdi waxaa lagu xasuustaa inay ahayd codkii kuwa aan codka lahayn
NextKheyraadka lagu caawinayo soogalootiga inay horumariyaan xirfad Main